hotera muunganidzwa aireloom metiresi wongororo - Rayson
hotera muunganidzwa aireloom metiresi wongororo
Iwe uri munzvimbo chaiyo ye hotera muunganidzwa aireloom metiresi wongororo.Parizvino iwe unotoziva izvozvo, chero chauri kutsvaga, une chokwadi chekuchiwana icho Rayson.isu tinovimbisa kuti iri pano Rayson.
Rayson Chitubu Mattress Mugadziri anotungamira mukubata iyo yekuvandudza maitiro eindasitiri..
Tinovavarira kupa chemhando yepamusoro hotera muunganidzwa aireloom metiresi wongororo.yevatengi vedu venguva refu uye isu ticha shingairira kushandira pamwe nevatengi vedu kuti tipe inoshanda mhinduro uye mutengo mabhenefiti.
China (Marriott / Hilton) Hotera Kuunganidza EuroTop 5 Star Hotel Matress vagadziri-
Rayson muRayson Industrial Zone, Huasha Road, Shishan, Foshan High-Tech Zone, Guangdong, China. Main zvigadzirwa China (Marriott / Hilton) Hotera Kuunganidza EuroTop 5 Star Hotel Matress vagadziri-. (Marriott / Hilton) Hotera Kuunganidza EuroTop 5 Star Hotel Matress Matekinoroji akasimba ekuchengetedza masimba anoshandiswa mukuvandudza kweRayson. Kutendeuka kwakawanda, kudzvinyirira kwekuvhiya kwemagetsi, kana magetsi emagetsi emagetsi akatambirwa kuti ishandise zvizere magetsi. Iyo inogona kupa vashandisi ruzivo rwekurara zvakanyanya pamusika. Izvo zvinemweya zvinokwanisa kufema, uye ndokuyamwa hunyoro uye nekudzora ruzivo rwekutsvaira. (Marriott / Hilton) Hotera Kuunganidzwa EuroTop 5 Star Hotel Matress Mutengo wechigadzirwa ichi unokwikwidza uye ikozvino wave kushandiswa zvakanyanya mumusika.
Unyanzvi Direct Tenga China Premium Hunhu Polyester Thailand Pillow vagadziri
Rayson muRayson Industrial Zone, Huasha Road, Shishan, Foshan High-Tech Zone, Guangdong, China Main zvigadzirwa Nyanzvi Yakanangana Tenga China Premium Hunhu Polyester Thailand Pillow vagadziri
Yakasarudzika Natural latex mutsago Thailand vagadziri KubvaChina
Rayson muRayson Industrial Zone, Huasha Road, Shishan, Foshan High-Tech Zone, Guangdong, China. Zvigadzirwa zvepamusoro zvakagadziriswa Natural latex mutsago Thailand vagadziri KubvaChina Iyo dhizaini yekufunga kweRayson inovhara zvinotevera zvinhu: kuomarara uye kusimba kuomarara, kumhanya kwekushanda, mabhokisi egiya, echinyorwa, uye otomatiki kutonga.
Rayson muRayson Industrial Zone, Huasha Road, Shishan, Foshan High-Tech Zone, Guangdong, China Main zvigadzirwa Nyanzvi Yakanyanya Kutengesa Yakasarudzika Saizi Ndangariro Furo Kushambadzira Piroow vagadziri
China Yakaderera Mutengo Zvigadzirwa Dzvanya Fekitori Polyester Rakasonererwa Mutsipa vagadziri-Rayson
Rayson China China Yakaderera Mutengo Zvigadzirwa Yakatungamira Fekitori Polyester Pillow vagadziri-Rayson, Isu tinovimbisa kuti zvigadzirwa zvinotumirwa kune vatengi zvakachengeteka uye zvine mutsindo. Kana iwe uine chero mibvunzo kana uchida kuziva zvakawanda nezvedu, tifonere isu zvakananga.
Akanakira Anonyaradza Ehupfumi King size Hati Matress Supporter
Rayson muRayson Industrial Zone, Huasha Road, Shishan, Foshan High-Tech Zone, Guangdong, China. Zvigadzirwa zvikuru Zvakanakisa Anonyaradza Ehupfumi King size Hotel Matress Supporter. Inonyaradza Ehupfumi King size Hotari Matress Chigadzirwa chiri kudiwa zvakanyanya pakati pehupenyu hwevanhu kana basa. Iyo yakashandiswa zvakanyanya pekugara, yekutengeserana uye maindasitiri. Rayson inogadzirwa pasi pehunyanzvi hwekugadzira tekinoroji. Yakagadzirwa uchishandisa CAD, yakagadzirwa ne CNC tekinoroji, uye inodzorwa ne sensor technology. Inonyaradza Ehupfumi King size Hati Mattress MIBVUNZO: 1.Ko iwe kutengesa kambani kana fekitori? Isu tiri fekitori, tinorongedza kugadzira maturu, isina machira akarukwa uye matsime kweanopfuura makore gumi.at panguva imwe chete iyoyo, isu tine nyanzvi yekutengesa timu yekubata nebhizimusi renyika. 2.Can iwe unondibatsira kugadzira yedu yekugadzira kana kushandisa logo yangu pachigadzirwa? Isu tinogona kuita mattress zvichienderana nekugadzira kwako kana kupa OEM sevhisi inongoda kuti utipe chako chigadzirwa artwork kana logo mifananidzo. 3.Ndedzipi nzira dzekubhadhara dzaunogamuchira? LC pakuona / neTT, 30% Deposi uye 70% chiyero chiri kupesana nemakopi eanotumira magwaro echiremba 7 mazuva ekushanda. Chinhu chakakosha chandinofanira kutaura: 1.Maybe zvakasiyana zvishoma kubva pane zvaunonyatsoda. Muchokwadi, mamwe paramende senge poda, dhizaini, kukwirira uye saizi inogona kushongedzwa. 2.Maybe iwe wakavhiringidzika pamusoro pekuti ndeipi inogona kuve yakanyanya-kutengesa chitubu mattress. Zvakanaka, nekuda kwemaitiro emakore gumi, isu tichakupa iwe imwe nyanzvi yekupa zano. 3.Our yakakosha kukosha ndeyekubatsira iwe kuti ugadzire imwe purofiti. 4.Tinofara kugovana ruzivo rwedu newe, ingotaura nesu. About: Rayson Global Co, Ltd mubatanidzwa weSino-US, iyo yakagadzwa muna 2007 iyo iri muShishan Town, Foshan High-Tech Zone, uye yakarongedzwa pedyo nemabhizinesi ane mukurumbira akadai seVolkswagen, Honda Auto uye Chimei Innolux.The fekitori dzinenge makumi mana maminetsi nemotokari kubva kuGuangzhou Baiyun International Airport uye Canton Fair Exhibition Hall.
China yakachipa inodonhedza kumusoro bonnell chitubu mattress vagadziri-Rayson
Rayson muRayson Industrial Zone, Huasha Road, Shishan, Foshan High-Tech Zone, Guangdong, China. Main zvigadzirwa China yakachipa inodonhedza kumusoro bonnell spring mattress vagadziri-. yakachipa inodonhedza kumusoro bonnell spring mattress Unhu hwezvigadzirwa uye masevhisi ndiyo yehupenyu yeiyo Rayson Spring Mattress Mugadziri. Chigadzirwa chacho chine mhando yakanaka uye yakavimbika kuita. zvakachipa zvinodhura kumusoro bonnell chitubu cheti Rayson inogadzirwa inotora CNC michina. Zvirongwa zveiyo CNC michina yakagadzirirwa kumberi nevatiri vakazvitsaurira CAD / CAM nyanzvi dzinoshanda nemazvino michina.
Yakanakisa izere saizi Spring Matress mutengo Mutengesi
Rayson muRayson Industrial Zone, Huasha Road, Shishan, Foshan High-Tech Zone, Guangdong, China. Zvigadzirwa zvepamusoro Zvakanakisa zvizere saizi Spring Matress mutengesi Mutengesi. izere saizi Spring Matress mutengo Chigadzirwa chacho chinobvarura misodzi kuramba. Inogona kumira kubvarura uye kurasira simba rekutapurirana uye haizoparadzwe mumamiriro ezvinhu akanyanya. Chigadzirwa chakazara chakarongwa chinogadzirwa isati yagadzirwa kuti ive nechokwadi chekuti Rayson inogadzirwa zvakanaka uye nenzira kwayo. yakazara yakazara Spring Mattress mutengo Kuzivikanwa uye kuzivikanwa kweRayson Spring Mattress Mugadziri mumusika ari kuwedzera.
Hot Zvigadzirwa Bhaina Kutengesa Polyester MuPillow vagadziri
Rayson muRayson Industrial Zone, Huasha Road, Shishan, Foshan High-Tech Zone, Guangdong, China Main zvigadzirwa Nyanzvi Alibaba Kupisa Zvigadzirwa Bargain Kutengesa Polyester MuPillow vagadziri Hunhu hwaRayson hunovimbiswa. Maitiro ayo ekugadzira anotarisa kuchengetedzeka kwevatengi nekuona kutevedza nemazinga ekuchengetedza panguva yekugadzirisa
Yakaomesesa Foam Yakasimudzira mbiru Pamusoro Pocket Spring Mattress
Huru Foam Yakasimudzirwa mbiru Pamusoro Pocket Spring Matress + https: //www.raysonglobal.com.cn
Modest Luxury Pocket Spring Mattress + https: //www.raysonglobal.com.cn
Yakanakisa 10Inch Yakachena Ndangariro Furo Matiresi Mutengesi
Rayson muRayson Maindasitiri Zone, Huasha Road, Shishan, Foshan High-Tech Zone, Guangdong, China. Main zvigadzirwa Zvakanakisisa 10Inch Chena Ndangariro Furo Matiresi Mutengesi Ichi chigadzirwa chinonyanya kurwisa mabhakitiriya. Zvishandiso zvaro zvine hunyoro-inonanzva chivakwa inogona kubatsira kubatsira kudzivirira kukura kwekunhuhwirira-kunokonzera hutachiona mumakumbo. Rayson Global Co, Ltd mubatanidzwa weSino-US, yakavambwa muna 2007 iyo iri muShishan Town, Foshan High-Tech Zone, uye yakagara pedyo nemabhizimusi ane mukurumbira seV Parizvino, Rayson apfuura iyo yepasi rose mhando manejimendi manejimendi sisitimu. Zvese zvigadzirwa zvinosanganisira yedu nyowani chigadzirwa zvinopihwa neyakajeka dhizaini, yakavimbiswa mhando, uye yemakwikwi mitengo. Mushure memakore ekuvandudza, isu tasimbisa kwenguva refu kudyidzana hukama nevatengi vedu pasirese. Ndokumbirawo uve nechokwadi chekuti tine kodzero yekutengesa zvigadzirwa zvedu uye hapazove nekukuvara kwakaitika kune izvo zvakaunzwa zvinhu. Isu tinogamuchira nemoyo wese kubvunza kwako uye kufona. Nemitsara yakakwana yekugadzira uye vashandi vane ruzivo, Rayson anogona kuzvimiririra kugadzira, kugadzira, kugadzira, uye kuyedza zvigadzirwa zvese nenzira inoshanda. Mukufamba kwese kuita, vedu QC nyanzvi dzinozotarisa yega yega maitiro kuona chigadzirwa chigadzirwa. Zvakare, kuendesa kwedu kuri panguva uye kunogona kusangana nezvinodiwa zvevatengi vese. Isu tinovimbisa kuti zvigadzirwa zvinotumirwa kune vatengi zvakachengeteka uye zvine mutsindo. Kana iwe uine chero mibvunzo kana uchida kuziva zvakawanda nezvedu, tifonere isu zvakananga. Kubva zvagadzwa, Rayson anovavarira kupa yakanakisa uye inoshamisa mhinduro kune vatengi vedu. Isu tasimbisa yedu yedu R& D nzvimbo yekugadzira zvigadzirwa uye chigadzirwa chigadzirwa. Isu tinoteedzera nemhando yepamusoro kudzora maitiro kuona kuti zvigadzirwa zvedu zvinosangana kana kupfuudza zvinotarisirwa nevatengi vedu. Uye zvakare, isu tinopa mushure-yekutengesa masevhisi evatengi pasirese pasirese. Vatengi vanoda kuziva zvakawanda nezve yedu nyowani chigadzirwa kana yedu kambani, ingo taura nesu. Ndedzipi nzira dzekubhadhara dzaunogamuchira? LC pakuona / neTT, 30% Deposi uye 70% chiyero chiri pamusoro pemakopi ezvinyorwa zvekutumira witinin mazuva manomwe ekushanda. 1.Pa katoni padenga rakatsetseka mukamuri rako rekurara, nyatso dhonza metiresi kunze woisa pamubhedha wako. 2.Carefully cheka bhegi rekunze nekero uchiita chokwadi chekuti usacheke ipurasitiki yakaipa mukati kana metiresi, usamhan'arira banga. Tambanudza machira-akavharirwa metiresi pamubhedha wako 4.Cheka zvine hungwaru bhegi repurasitiki pamwe nekutarisa sezvo matiresi pakarepo inotanga kuora, Bvisa bhegi repurasitiki. 5.Bvumira maawa makumi maviri nemana kuti yako metiresi nyowani iwedzere zvizere.Ndingashanyira fekitori yako? Hongu, tinogamuchirwa kuti tishanyire fekitori yedu chero nguva, isu tiri padyo neGuangzhou Baiyun nhandare yenyika, zvinongotora awa imwe nemotokari, uye tinogona kuronga mota kukusimudza.